खिम्तीका बाढीपीडित कहाँ बस्ने सरकार ? - Suvham News
खिम्तीका बाढीपीडित कहाँ बस्ने सरकार ?
August 5, 2017 by gsmktm
रामेछापको लिखु गाउँपालिका-६, खिम्तीका शम्भु विक ‘बिरामीजस्तै’ छन् । उनलाई शरीर र हात-गोडा काँप्ने समस्या थपिएको छ । असार ३१ गते गोकुलगंगा र लिखु गाउँपालिकाको सिमाना भएर बहने छतवनी खोलामा आएको बाढीले घर र जायजेथा बगाउँदा मुस्किलले उनको ज्यान बचेको थियो । उक्त घटनाबाट पीडित उनमा शरीर र हात-गोेडा काँप्ने समस्या देखिएको हो ।
पहिले घर भएको ठाउँमा अहिले खोला बगिरहेको छ । छिमेकीको घरमा आ श्रय लिएर बस्नुपरिरहेको छ । यसरी कति दिन बस्न दिन्छन् ?
शम्भु विक, बाढीपीडित
बाढीबाट ज्यान जोगाए पनि घरजग्गा र भएका सम्पत्ति गुमाउनुपरेकाले पुनःस्थापनाको चिन्ताले सताएको छ । लिखु गाउँपालिकाले मृतकका परिवारलाई जनही २५ हजार तथा घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बनेको १२ घरलाई पुनर्वासका लागि ५० हजार, लत्ताकपडाका लागि १५÷१५ हजार उपलब्ध गराएको छ । त्यससँगै अन्य निकाय र सहयोगी संस्थाबाट पनि राहत सामग्री उपलब्ध भइरहेका छन् ।
उनीहरूलाई कहाँ र कसरी पुनःस्थापित गराउने भन्नेबारे केही निर्णय भएको छैन । चाँडै पुनःस्थापना प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । ‘पहिले घर भएको ठाउँमा अहिले खोला बगिरहेको छ । छिमेकीको घरमा आ श्रय लिएर बस्नुपरिरहेको छ’, भविष्यप्रति चिन्तित हुँदै शम्भुले भने, ‘अर्काको घरमा यसरी कति दिन बस्न दिन्छन् ? थाहा छैन । हामी त्यसपछि कहाँ जाने । सरकारले चाँडै व्यवस्था गरिदियोस् ।’
अर्का पीडित टंकको पनि यस्तै माग छ । ‘हाम्रो कमाई खाने खेतको नामोनिसान छैन । अब खेती-किसानी गरेर खाऊँ भने पनि ठाउँ छैन । टाउको लुकाउने घर बनाउन पनि ठाउँ छैन’, उनले भने, ‘अब सरकारले नै हेरिदिनुपर्छ । तर, चाँडै गरिदियोस् ।’
गाउँपालिका उपाध्यक्ष दीपशिखा दाहालले बाढीपीडितलाई पुनःस्थापनाको प्रयास भइरहेको बताइन् । ‘बाढीबाट पीडितको तत्काल उद्धार गर्नु थियो । त्यो मानवीय उद्धार भइसकेको छ । त्यसपछि उनीहरूको पुनर्वासका लागि गाउँपालिकाले तत्काल केही रकम उपलब्ध गराइसकेको छ । उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि पनि गाउँपालिकाले पहल गर्ने नैछ’, उपाध्यक्ष दाहालले भनिन्, ‘तत्काललाई बाढीले ठप्प भएको खानेपानी र सिँचाइको सम्बन्धमा पनि काम गर्नुपरेको छ ।’
Prevजरो किलो नेपाल मै भयको मौलिक रैथाने पर्व #सुर्माभवानी दार्चुला
Nextखाल्डोमा डुबेर तराईमा ४ जना बालिकाको मृत्‍यु